Indibaniselwano yokuchwetheza | Abadali be-Intanethi
Encarni Arcoya | 29/03/2022 12:37 | Ukuhlaziywa ukuba 31/03/2022 23:41 | Ukuphefumlelwa
Kumatyeli aliqela sikuxelele ukuba akulunganga ukusebenzisa iifonti ezininzi ezahlukeneyo kuyilo, kuba kwenza umbukeli aphulukane ngokupheleleyo. Kodwa inokuba yimithombo emibini. Kodwa, kwenziwa njani ukudityaniswa kwefonti? Ngaba ezimbini ezahlukeneyo kakhulu zinokuxutywa kunye? Ngaba kufuneka ulandele imigaqo?
Esi sihloko sinokuba nomdla kuwe nokuba ungumyili wegraphic okanye umbhali nje, njengoko siya kukunika izitshixo zokwazi ukuba zeziphi ezona zidibaniso zilungileyo ukuze isicatshulwa okanye iprojekthi ibonakale igqibelele. Ziphose kuyo?
1 Yintoni omele uyigcine engqondweni xa udibanisa iifonti
1.1 Jonga ulungelelwaniso nokufunda isicatshulwa
2 Indibaniselwano yokuchwetheza ebetha kakhulu
2.1 IMontserrat kunye neCourier New
2.2 League Spartan kunye Baskerville Free
2.3 Nixie One kunye neLato Light
2.4 UJosefin Slab kunye neFauna One
2.5 Ukurhweba ngeGothic kunye neSabon
Yintoni omele uyigcine engqondweni xa udibanisa iifonti
Phambi kokuba sikunike imizekelo yokudityaniswa kwefonti, sifuna ukuba ugcine izinto ezimbini engqondweni.
Eyokuqala kukuba akufuneki udibanise ngaphezulu kweefonti ezi-2 kwisicatshulwa esifanayo. Isizathu kukuba ulayisha kakhulu isithuba, kwaye ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa ulahlekelwa ngumdla wombukeli.
Ngokomzekelo, khawube nomfanekiso-ngqondweni wakho uneqweqwe. Ubeka isihloko ngefonti; umbhalo ongezantsi nomnye. Kwaye umbhali nomnye. Ucinga ukuba ziyafana? Ibandakanya ntoni le projekthi? Eyona nto ikhuselekileyo kukuba ayenzi, oko kuthetha ukuba umsebenzisi oyibonayo akazi ukuba alindele ntoni.
Kwakhona, iifonti ezahlukeneyo zinokuyenza ixinene kakhulu. Ke ngoko, kuhlala kungcono ukwenza ubuninzi botshintsho lwefonti ezimbini.
Inkalo yesibini ekufuneka uyilawule iphathelele kwiintlobo zeefonti. Kwimeko apho awuyazi, kukho iifonti ezahlukeneyo onokuthi uziqwalasele xa udibanisa. Ukukunika umbono, unayo:
I-Serif: yi-typography ebonakala ngokuba nesiphelo esincinci ekupheleni kweeleta. Oku akufuneki kubonakale njengento yokuhlobisa ngokugqithiseleyo, kodwa inokuba yincinci. Kufana nezivatho ezibekwe phezu kwayo.
I-Sans serif: ukuba ngaphambi kokuba sikuxelele ukuba iileta zinezihombiso, kulo mzekelo olu hlobo lwefonti alunayo, lulula.
I-script: Ikwabizwa ngokuba yi-typeface ebhalwe ngesandla. Yindlela yokubhala ebonakala ngathi ibhalwe ngesandla, kunye neenkcukacha ezikhethekileyo.
I-Slab serif: Ludidi lochwethezo oluchongwa nge-serif engqingqwa, enebhloko (isihombiso).
Jonga ulungelelwaniso nokufunda isicatshulwa
Omnye umba othi bambalwa kakhulu awuthathele ingqalelo, kwaye obaluleke kakhulu xa ukhetha imidibaniso yokuchwetheza, kukulungelelaniswa kwesicatshulwa kunye nokufunda kwaso.
Siqala ngolungelelwaniso, oko kukuthi, ukuba isicatshulwa siza kufundwa silungelelaniswe ekhohlo, ekunene, embindini okanye sigwetyelwe. Ngokuxhomekeke koku, ifonti eza kusetyenziswa iya kwahluka, kuba ngokwesiqhelo, kwaye kulo mzekelo sithetha ngoyilo lwegraphic, umhombiso othile uya kubekwa ngeenxa zonke kuwo.
Kwelinye icala, kwakuya kufundwa isicatshulwa, oko kukuthi, ukuba siza kusuka ekhohlo siye ekunene, ukusuka ekunene ukuya ekhohlo okanye ngokuthe nkqo. Kwimeko yokugqibela, ukukhetha ifonti efundeka kakuhle kwaye ikuvumela ukuba ufunde ngaphandle kokulibala igama kubaluleke kakhulu kunokuhlobisa okubeka kuyo.
Indibaniselwano yokuchwetheza ebetha kakhulu
Njengoko sikwafuna ukusebenza kwaye unokuba nemizekelo yokudityaniswa kwefonti, nazi ezinye izimvo ezinokuza luncedo.
IMontserrat kunye neCourier New
I-Montserrat typeface sesinye esikuxelele ngaso ngamanye amaxesha kuba yenye yezona zinto zilungileyo ukwenza izihloko kunye nezihloko. Ke ngoko, siqale ngayo.
Ibonakala ngokuba yifonti epheleleyo kunye nengqukuva kwiileta zayo. Ijiyile.
Ngoko ke, eyona nto ingcono ukudibanisa nale nto ithambileyo, i-stroke elula. Sikhethe iCourier New kuba luhlobo lochwethezo olujongeka njengalo lomatshini wokuchwetheza kodwa oqaqambisa yonke ngokwayo. Kodwa ukuba awuyifuni loo nto, ungakhetha uhlobo olubhalwe ngesandla (olulinganisa ukubhala ngesandla) olufundekayo kwaye olungenabuqhokolo kakhulu. Okanye ifonti yeTimes New Roman.
League Spartan kunye Baskerville Free
Apha sinomnye umzekelo olandela isingqisho sangaphambili. Oko kukuthi, sibeka ifonti eshinyeneyo njengentloko okanye isihloko, njenge-League Spartan (eyi-sans serif) kwaye njengefonti yesicatshulwa esisisebenzisa i-Libre Baskerville, ethi ukuba ujonge inezihombiso ezincinci kodwa zilungile, ifundeka kakhulu kwaye loo nto yenza umahluko ofanelekileyo nale yangaphambili.
Nakwimibhalo engezantsi engasentla ungasebenzisa kwakhona i-Free Baskerville kubungakanani obukhulu.
Nixie One kunye neLato Light
Kule meko siza kukunika omnye umzekelo wendibaniselwano yokuchwetheza enokuthi ibe luncedo. Kwaye kukuba bobabini banokukhanya, kodwa ukuba ukhangele, bahluke omnye komnye.
Kwelinye icala, sine-Nixie One, uhlobo lwefonti ye-serif esiyifake kuzo zonke iikepusi ukuze ibonakale njengesihloko. Kwelinye icala, unokukhanya kweLato, okuyi-sans serif kwaye ikwazile ukwenza uyilo oluhle nolula.
Ngokwenyani zombini iifonti zikhaphukhaphu, kodwa okubhaliweyo kunesithuba esingaphezulu kancinane phakathi koonobumba kuyayivumela ukuba ivuleke kakhulu kwaye ifundeke; ngelixa isihloko sinoonobumba abancanyathiselwe kakhulu kwaye sitshajwa kwakhona kancinane.
UJosefin Slab kunye neFauna One
UJosefin Slab yenye yezona fonti zisetyenziswa kakhulu, ngakumbi izihloko kunye neelogo kuba itsala ingqwalasela enkulu kwaye ifezekisa isiphumo esinomdla kakhulu. Ukongeza, nangona kungabonakali ngathi, ukugqiba kunamandla.
Ke, kuya kufuneka ukhethe uhlobo lochwethezo oluthambisa lonke, kwaye koku ungakhetha iFauna One, kodwa sikwacebisa iNunito Light okanye iMerriweather efanayo kwaye iphumeze eso siphumo.
Kule meko, endaweni yokukhetha ifonti ye-serif yesicatshulwa, siyikhethele isihloko, ngendlela yokuba sigxininise ingqalelo yomsebenzisi apho kwaye, kamva, siyidibanise kunye nochungechunge lwe-sans, lula ukuyifunda kunye nokubhala. inokwenzeka nge-stroke egudileyo kunaleyo yesihloko.
Ngoku ekubeni uyayazi indibaniselwano yefonti, unokuba nombono wendlela yokukhetha iifonti ezahlukeneyo kuyilo lwakho okanye iiprojekthi. Ngaba unokucinga ngayo nayiphi na enye iseti yamagama? Yiyeke kuthi kwizimvo!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Indibaniselwano yokuchwetheza